के तपाई आफ्नो प्रेमी-प्रेमीकासँग सम्बन्ध तोड्दै हुनुहुन्छ? विचार गर्नुहोस् यी कुराहरु | Tapaiko Khabar
आज : २०७६ कात्तिक ३ गते
के तपाई आफ्नो प्रेमी-प्रेमीकासँग सम्बन्ध तोड्दै हुनुहुन्छ? विचार गर्नुहोस् यी कुराहरु
तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : फागुन १७, २०७५ जीवन शैली-यौन जिज्ञासा
सम्बन्ध तोड्न झैँ जोड्न सहज हुन्न । पार्टनरसँगको असझदारीमा सम्बन्ध तोड्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने निर्णय लिनुभन्दा अगाडि आफैसँग केही प्रश्न गर्नु उत्तम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आफैँसँग गरिने प्रश्नको अधिकांश उत्तर हो मा आयो भने ब्रेकअप गर्नु राम्रो, हैनमा आयो भने सम्बन्ध सुधार्ने बाटो अझै बाँकी छ भन्ने देखाउँछ । ब्रेकअपको निर्णय अगाडि आफैँसँग गर्न सकिने केही प्रश्न
के पार्टनरले धोका दिइरहेको छ?
अधिकांश सम्बन्ध तोडिनुको कारण सम्बन्धमा इमानदारिताको कमी देखिन्छ । ऊ एकभन्दा बढी सम्बन्धमा हुनसक्छ । एकभन्दा बढी व्यक्तिसँग एकैपटक डेटमा बस्ने पनि हुन्छन् । तर कहिलेकाहीँ यो शंकाको परिणाम पनि हुनसक्छ । शंकाकै भरमा वर्षौंदेखिको सम्बन्ध तोड्ने राम्रो हैन । पार्टनरको व्यवहारमाथि शंका छ भने मनमा गुम्स्याएर नराखी प्रस्ट कुरा गर्नु उत्तम । यसले झुठ बोलिरहेको हो या शंका सत्य हो भन्ने छुटिन्छ । यदि धोका दिइरहेको देखिए पुनर्मिलन भन्दा ब्रेकअपको निर्णय राम्रो हो ।
पछि पछुतो त हुन्न ?
सम्बन्ध तोड्ने निर्णय अगाडि आफैँसँग सोध्नु कतै यो निर्णयपछि पछुतो त हुन्न रु ब्रेकअप गरिसकेपछि उसको यादले धेरै सताउने पो हो कि, सँगै बिताएका पलले पटक–पटक उसैको सम्झँदा फर्काइरहने पो हो कि रु सम्बन्ध तोडेर खुसी हुन सकिन्न कि रु यी प्रश्नको अधिकांश जवाफ हो मा आयो भने सम्बन्ध सुधारमा लग्नु उत्तम ।
समय छैन भन्दै इग्नोर त गरिरहेको छैन ?
पार्टनबीच एक अर्कासँग बिताउने समय नहुँदा पनि धेरै सम्बन्ध टुटिरहेका छन् । यदि तपाईंको पार्टनरले पनि पर्याप्त समय दिइरहेको छैन भने ऊसँग समय नै नभएर नदिएको हो या बहाना बनाएको यो पाटोमा क्लियर हुन आवश्यक छ । कतिपय अवस्थामा पार्टनरसँग समय भएको बेलामा तपाईंसँग समय नहुनसक्छ, कहिले तपाईंसँग समय भएको बेलामा पार्टनर व्यस्त हुन सक्छन् । यो हो भने संयोग मात्र हो । यस्तो हो भने यसमा दुवैको दोष हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ब्रेकअप गर्नुभन्दा समय व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु राम्रो ।
कतै मनमा सम्मान र प्रेम नै छैन कि ?
सम्बन्धको प्रारम्भमा मनमा प्रेम भए पनि सम्बन्ध अगाडि बढेसँगै बिस्तारै सम्मान र प्रेम घट्दै जानसक्छ । यसका विविध पक्ष हुन सक्छन् । प्रारम्भमा जो सोचेको हो त्यस्तो नहुँदा, बिस्तारै विचार र प्राथमिकता फरक पर्दा यस्तो अवस्था आउन सक्छ । यदि यो चरणमा सम्बन्ध पुगिसकेको छ भने सम्बन्ध तोड्नु राम्रो । तर पार्टनरको मनमा प्रेम नभएको भ्रम हो या हैन त्यसमा भने क्लियर हुनुपर्छ ।
मानसिक तनावले ब्रेकअपको सोच त आएन ?
अहिलेको व्यस्त दैनिकीमा आउने मानसिक तनावको प्रभाव व्यक्तिगत सम्बन्धमा पनि पर्छ नै । यसले व्यक्ति झगडालु, सानो विषयमा रिसाइहाल्ने पनि हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा सामान्य गुनासोले पनि सम्बन्धमा प्रभाव पार्न सक्छ र व्यक्ति सम्बन्ध टुटाउने निर्णयमा पुग्नसक्छ । यस्तो अवस्थामा एकपटक विचार गरौं, सम्बन्ध जीवनको एक अमूल्य उपहार हो । सनकको भरमा यसलाई नतोडौं ।
यस भन्दा अगाडीआइसिसी टि- २० वरियतामा नेपालका तिन खेलाडीको स्थान
यस पछिनेपाली चलचित्र ‘सरौतो’ को ‘चुलो चौको’ बोलको गीतको छायांकन
मानिसहरु रोइरहेको त धेरै देख्नुभएको छ होला के तपाईलाई थाहा छ आँशु किन बग्छ ?
खुसी रहन गर्नैपर्ने १४ कामहरु
तपाइँले अन्तिम पटक कहिले सेक्स गर्नुभयो थाहा पाउछ फेसबुकले
यस्ता व्यक्तिहरुको स्वभाव खर्चालु हुन्छ
reason to Break up